.ချစ်သူများနေ့မရောက်ခင်မှာတောင် ချစ်ဇနီးနန္ဒာလှိုင်ကြိုက်တတ်တဲ့လက်ဆောင်လေးကို နိုင်ငံခြားကနေ တကူးတကမှာပြီး Surprise လုပ်ခဲ့တဲ့ ကိုဇေသီဟ. – Askstyle
.ချစ်သူများနေ့မရောက်ခင်မှာတောင် ချစ်ဇနီးနန္ဒာလှိုင်ကြိုက်တတ်တဲ့လက်ဆောင်လေးကို နိုင်ငံခြားကနေ တကူးတကမှာပြီး Surprise လုပ်ခဲ့တဲ့ ကိုဇေသီဟ.
ဗီဒီယိုေခတ္ကတည္းက ျမန္မာ့အႏုပညာေလာကမွာ လ်ွမ္းလ်ွမ္းေတာက္ နာမည္ႀကီးခဲ့တဲ့ မင္းသမီးေခ်ာ နႏၵာလိႈင္ကို လူၾကီး၊ လူငယ္ ပရိသတ္တိုင္းလိုလို ခ်စ္ၾကမယ္ ထင္ပါတယ္။ စြဲေဆာင္မႈရိွၿပီး ေျပျပစ္လွပလြန္းတဲ့ နႏၵာလိႈင္က အိမ္ေထာင္က်ျပီး ကေလးသံုးေယာက္ရသြားသည့္တိုင္ အခုခ်ိန္ထိ လွေသြးႂကြယ္ေနဆဲ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦး ျဖစ္ပါတယ္။ နႏၵာလိႈင္က လက္ရိွမွာေတာ့ အႏုပညာအလုပ္ေတြကို လံုးဝရပ္နားလိုက္ျပီး မိသားစုအတြက္ အိမ္ေထာင္ရွင္မတစ္ေယာက္အျဖစ္နဲ့သာမက စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္တစ္ေယာက္အျဖစ္ ဘဝကို ေအးေအးခ်မ္းခ်မ္းျဖတ္သန္းေနတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။
နႏၵာလိႈင္ကေတာ့ အိမ္ေထာင္သက္တမ္း (၁၂) နွစ္ေက်ာ္တိုင္ရိွေနျပီျဖစ္တဲ့ နႏၵာလိႈင္က သူမရဲ့ ခင္ပြန္းသည္ ကိုေဇသီဟဆီမွာလည္း ၾကင္စဦးအတိုင္း အခ်စ္ခံေနရဆဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီတစ္ေခါက္မွာလည္း ကိုေဇသီဟက ဇနီးသည္ နႏၵာလိႈင္ဆီကို ခ်စ္သူမ်ားေန့အမွတ္တရ လက္ေဆာင္ေလးေပးခဲ့ေၾကာင္း “နႏၵာက ပန္းပင္ေတြ စိုက္ေနတာျမင္ေတာ့ Valentine’s Day ေန႔မွာ ေပးဖို႔ ထိုင္းကို အပင္ေတြ လွမ္းမွာလိုက္တယ္။ နိဗၺာန္ၾကာ ၁၀ ပင္ေပါ့။ ဟိုကပို႔တဲ့လူက စိတ္ေစာၿပီး ဒီေန႔အေရာက္ပို႔လိုက္တာ စပ႐ိုက္ တိုက္မဲ့ အစီအစဥ္ ပ်က္သြားပါေလေရာ.. မတတ္ႏိုင္ဘူးေလ.. ေစာေရာက္ေတာ့လဲ ေစာ သိသြားတာေပါ့.” ဆိုျပီး ေျပာလာပါတယ္။
နႏၵာလိႈင္ရဲ့ ခင္ပြန္းကေတာ့ နႏၵာလိႈင္ၾကိဳက္တတ္တဲ့အပင္ေလးေတြကို နုိင္ငံျခားကေန တကူးတက မွာေပးျပီး လက္ေဆာင္ေပးတာ အရမ္းအလိုက္သိတတ္တာပဲေနာ္။ ပရိသတ္ၾကီးလည္း အိမ္ေထာင္ေရးမွာ ကံေကာင္းလြန္းတဲ့ နႏၵာလိႈင္ကို အားက်ေနၾကမယ္ ထင္ပါတယ္ေနာ္။ ဖတ္ရႈေပးတဲ့ Cele Connections ပရိသတ္ႀကီးအားလုံးလည္း သာယာေပ်ာ္႐ႊင္တဲ့ေန႔ေလးတစ္ေန႔ကို ပိုင္ဆိုင္ႏိုင္ပါေစလို႔ ဆုေတာင္းေပးလိုက္ပါတယ္။
Source: Zay Thiha’s fb
ချစ်သူများနေ့မရောက်ခင်မှာတောင် ချစ်ဇနီးနန္ဒာလှိုင်ကြိုက်တတ်တဲ့လက်ဆောင်လေးကို နိုင်ငံခြားကနေ တကူးတကမှာပြီး Surprise လုပ်ခဲ့တဲ့ ကိုဇေသီဟ
ဗီဒီယိုခေတ်ကတည်းက မြန်မာ့အနုပညာလောကမှာ လျှမ်းလျှမ်းတောက် နာမည်ကြီးခဲ့တဲ့ မင်းသမီးချော နန္ဒာလှိုင်ကို လူကြီး၊ လူငယ် ပရိသတ်တိုင်းလိုလို ချစ်ကြမယ် ထင်ပါတယ်။ စွဲဆောင်မှုရှိပြီး ပြေပြစ်လှပလွန်းတဲ့ နန္ဒာလှိုင်က အိမ်ထောင်ကျပြီး ကလေးသုံးယောက်ရသွားသည့်တိုင် အခုချိန်ထိ လှသွေးကြွယ်နေဆဲ အမျိုးသမီးတစ်ဦး ဖြစ်ပါတယ်။ နန္ဒာလှိုင်က လက်ရှိမှာတော့ အနုပညာအလုပ်တွေကို လုံးဝရပ်နားလိုက်ပြီး မိသားစုအတွက် အိမ်ထောင်ရှင်မတစ်ယောက်အဖြစ်နဲ့သာမက စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တစ်ယောက်အဖြစ် ဘဝကို အေးအေးချမ်းချမ်းဖြတ်သန်းနေတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
နန္ဒာလှိုင်ကတော့ အိမ်ထောင်သက်တမ်း (၁၂) နှစ်ကျော်တိုင်ရှိနေပြီဖြစ်တဲ့ နန္ဒာလှိုင်က သူမရဲ့ ခင်ပွန်းသည် ကိုဇေသီဟဆီမှာလည်း ကြင်စဦးအတိုင်း အချစ်ခံနေရဆဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီတစ်ခေါက်မှာလည်း ကိုဇေသီဟက ဇနီးသည် နန္ဒာလှိုင်ဆီကို ချစ်သူများနေ့အမှတ်တရ လက်ဆောင်လေးပေးခဲ့ကြောင်း “နန္ဒာက ပန်းပင်တွေ စိုက်နေတာမြင်တော့ Valentine’s Day နေ့မှာ ပေးဖို့ ထိုင်းကို အပင်တွေ လှမ်းမှာလိုက်တယ်။ နိဗ္ဗာန်ကြာ ၁၀ ပင်ပေါ့။ ဟိုကပို့တဲ့လူက စိတ်စောပြီး ဒီနေ့အရောက်ပို့လိုက်တာ စပရိုက် တိုက်မဲ့ အစီအစဉ် ပျက်သွားပါလေရော.. မတတ်နိုင်ဘူးလေ.. စောရောက်တော့လဲ စော သိသွားတာပေါ့.” ဆိုပြီး ပြောလာပါတယ်။
နန္ဒာလှိုင်ရဲ့ ခင်ပွန်းကတော့ နန္ဒာလှိုင်ကြိုက်တတ်တဲ့အပင်လေးတွေကို နိုင်ငံခြားကနေ တကူးတက မှာပေးပြီး လက်ဆောင်ပေးတာ အရမ်းအလိုက်သိတတ်တာပဲနော်။ ပရိသတ်ကြီးလည်း အိမ်ထောင်ရေးမှာ ကံကောင်းလွန်းတဲ့ နန္ဒာလှိုင်ကို အားကျနေကြမယ် ထင်ပါတယ်နော်။ ဖတ်ရှုပေးတဲ့ Cele Connections ပရိသတ်ကြီးအားလုံးလည်း သာယာပျော်ရွှင်တဲ့နေ့လေးတစ်နေ့ကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။